ओली-नेपाल समूहबीच सिंहदरबारमा वार्ता जारी, काे-को छन् सहभागी ? यी हुन् छलफलका तीन एजेण्डा — Sanchar Kendra
काठमाडाैं । एमाले विवाद समाधानका लागि दुवै पक्षका नेताहरुबीच सिंहदरबारमा वार्ता भइरहेको छ । ओलीसँगको वार्तामा बस्नुअघि माधव नेपाल पक्षले तीनवटा बटमलाइन बनाएको बुझिएको छ ।
हामीले निश्चित तीन बटमलाइन बनाएका छौ सोही आधारमा नेताहरुबीच अहिले छलफल भएको छ, माधव पक्षका एक नेताले बताए । ओलीसँगको वार्ताबारे आज नेता नेपालले पहिला स्थायी समिति र पछि केन्द्रीय समितिका आफुपक्षीय नेताहरुसँग परामर्श गरेका थिए ।
काे-को छन् सहभागी ?
एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षसँगको वार्तामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई समेत सहभागी गराएका छन्। शुक्रबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा ओली र नेपालको भेटमा सहभागी दोस्रो तहका नेताहरूमा बादल समेत सहभागी भएका हुन्।
फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई अलग गराइदिएपछि बादल एमाले प्रवेश गरेका थिए। त्यसयता प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले प्रवेश गरेका बादल सहितका नेताहरूलाई सहभागी गराएर पार्टीका बैठका राख्ने गरेका छन्।
नेपाल पक्षले भने २०७५ जेठ २ गतेको पार्टी कमिटीका बैठकहरू राखेर एमाले प्रवेश गरेकाहरूलाई सहभागी गराउन सकिने बताउँदै आएका छन्। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भने बादलको समूहका नेताहरूबिनाको कुनै बैठक नराख्ने आफू निकटहरूसँग बताउँदै आएका थिए। सिंहदरबारको बैठकमा बादल सहभागी हुनुले पनि यही संकेत गरेको छ।